Bopet, Pet Fil, Daabacaadda Muuqaalka Saldhigga - Shuyang Genzon Novel Materials Co., Ltd.
Had iyo jeer leh fikrad adeeg wacan, tayo tayo sare leh oo tayo leh, adeeg iib iib ah ka dib, u dejiso sumcad suuq wanaagsan warshadaha filimka.
Qalabka Genzon Novel waa shirkad farsamo sare leh oo ku takhasustay cilmiga polymer-ka, isku-darka badeecada R & D, soo-saarka iyo iibka oo leh alaabooyin badan oo kala duwan iyo qaybaha dhammaystiran. Filimka polyester-ka si madax-bannaan u soo saaray oo ay soo saartay shirkadda ayaa si balaadhan loogu adeegsan karaa qaybaha kala duwan ee warshadaha sida bir-gelinta aluminiumka, daabacaadda, ilaalinta kaararka, naxaasidda, sii-deynta, dahabka iyo siligga qalinka, filimka kink, biyo-xireennada, mustaqbalka, shirkadda Qorshahan ayaa ah inuu ballaariyo dalabka qalabka dib-u-soo-celinta ee polyester-ka. Waqtigan xaadirka ah, shirkadda waxay leedahay 18,000 tan khadka soosaarka polyester, 4 German donier tooska dhalaalaysa qadka filimka soo-saarka gantaalaha iyo 1 qadka tijaabada ah. Waxay leedahay wax soo saar iyo saldhigyada R&D ee Jiangsu iyo meelo kale.
Mustaqbalka, agabyada Genzon Novel waxay ku salaysnaan doonaan aragtida caalamiga ah ee lagu dhisi karo sumadda Shiinaha oo ay ku dadaalaan sidii ay ugu noqon lahaayeen hoggaamiye wershadaha agabyada cusub adoo xoojinaya faa'iidooyinka jira, xoojinta hal abuurka madaxa bannaan, iyo horumarinta nadaafad nadiif ah iyo bay'ad deegaanka u fiican oo saaxibtinimo leh.
Baadhista Farsamada iyo kobcinta tikniyoolajiyadda
Kooxda R&D ee asaasiga ah, oo uu hogaaminayo dhakhtar wax ku soo bartay America, waxay ku yaalaan Silicon Valley si ay u nuugo tikniyoolajiyadda hogaamineysa adduunka Saldhigga heerka sare ee tijaabada filimka beeraha wuxuu ka caawiyaa iskudheellitirka cusub ee soo-saarka, daraasadda iyo baarista teknolojiyadda isku-darka polyester-ka ee sharaf-xumada leh, a adduunyada oo dhan hindise hanti aqooneed madaxbannaan iyo tikniyoolajiyad madaxbannaan
Waxaan haysannaa koox xirfadlayaal ah, khibrad leh oo karti leh si kor loogu qaado horumarka degdegga ah iyo horumarka joogtada ah ee Qalabka GENZON Novel ee dhinacyada cilmi-baarista tikniyoolajiyada iyo horumarka, maareynta wax soo saarka, xakamaynta tayada, maareynta suuqgeynta iyo hawlgalka ganacsiga iyo maareynta.
Wax soo saarka sanadlaha ah ee 180,000 tan ee warshadda 110,000m2
Afar Khadad soo saarista filimka-Dornir iyo hal sadar tijaabo oo guriga lagu sameeyay
Aqoon isweydaarsiyo ka hooseeya maaraynta heerka 6S
Alaabada siligga dahabka ah
alaabada korantada alaabada
ilaalinta qalabka korantada
Diirad saar waxyaalaha agabka guud ee GENZON, aqoon u yeelo isbadalada wershadaha, iskana ilaali waxyaabaha Maaddada GENZON ee maaddada agtaada ah.
Tan iyo qalabkii Genzon Novel wuxuu dhammeystiray isku-darka iyo dib-u-habeynta hantida oo wuxuu xaqiiqsaday bilowga habsami u socodka ah ee wax soo saarka, dhinaca kaliya ...
Isbarbardhiga habka wax soo saarka ...
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira laba dariiqooyin wax soo saar oo kala duwan oo warshadaha BOPET ah, mid ayaa ah habka goynta, mid kalena waa mid toos ah. Kahor 2013, suuqa inta badan wuxuu ku saleysan yahay habka goynta, halka ...
Xaaladda Hada taagan iyo Rajada laga qabo o ...
PX waa sheyga ugu horreeya ee waxsoosaarka guud ee dhammaan warshadaha polyester ， Isbeddelka warshadiisa wuxuu saameyn gaar ah ku leeyahay guud ahaan warshadaha gaarka ah. si rasmi ah u galaan horumarka ...
Qalabka Genzon Novel, ka qaybgal ...
28dii Sebtembar, munaasabaddii deegaanka ee Suqian Green Industry Expo ayaa lagu qabtay furitaankii weynaa ee Bandhigga Suqian. Mawduuca Bandhigga Cagaaran waa “cagaar, is-dhexgal iyo ka boodid ...